Mampiavaka ny fitsipiky ny fifamoivoizana any Thailand ~ Journey-Assist - Amin'ny làlan'i Thailand
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Mampiavaka ny fitsipiky ny fifamoivoizana any Thailand
Manofa fiara na bisikileta any Thailandy, manolotra lalànan'ny fifamoivoizana, fahazoan-dàlana amin'ny mpamily
Fitsipika fifamoivoizana any Thailand
Terminology voalohany - lisitry ny teny iray 🙂
BIKE - araka ny fiantsoan'izy ireo scooter amin'ny lasantsy ao Azia amin'ny famindrana ny motera 1000 ka hatramin'ny 1500 cubes. Afaka miantso môtô koa ianao, izay ampy ihany koa any Thailand. Amin'ny ankapobeny, BIKE izay rehetra moto sy kodia roa. 🙂 Mifankatiava ary firary!
Fanajana ny arabe any Thailand
Làlana simba, fitohanana matevina, fitohanan'ny fifamoivoizana any Thailand
Andalana sy làlana eny Thailand
Fahazoan-dàlana mitondra fiara any Thailand
Mampiavaka ny fitsipiky ny fifamoivoizana any Thailandy sy ny toro-hevitra
Fametrahana fiara ao Thailand
Sazy noho ny fanitsakitsahana ny fifamoivoizana
Ny zavatra voalohany tokony hohadinoina dia ny bisikileta (scooter) no fomba fitaterana be mpitia indrindra any Thailandy (toy ny any amin'ny tany Azia Atsimo Atsinanana). Ary ny fihetsika mifanaraka amin'izany dia misy fanajana.
Ny mpitondra fiara rehetra dia mahafantatra fa izy dia elefant pachyderm matanjaka ao anatin'ity tontolo malefaka manana kodiarana roa ity ary mikarakara azy tsara indrindra. Tsy misy olona “manapaka” na iza na iza (ary raha manao izany dia azo inoana fa tsy Thai, fa mpizahatany very). Raha vao manomboka mitaingina bisikileta ny vao manomboka, dia saika mahita izany hatrany ny mpitondra fiara ary miezaha mihazona azy ho azo antoka, mivezivezy ao anaty renirano ary mikambana.
Betsaka koa ny fiara (indrindra ny SUV, izay tena malaza any Thailand) miaraka amina fitaratra mijery "jamba".
Lalana lalana sy fifamoivoizana be
Zava-dehibe izany, indrindra ho an'ireo mitondra fiara. Raha ny hita aloha dia toa mora kokoa ny mitondra fiara eto, fa azo iadian-kevitra io. Ianao dia mila mahalala fa ny ankamaroan'ny mpampiasa làlana dia bisikileta. Ary tsy maintsy raisina izany. Ary, angamba, dia natao ho an'ireo fiara toy ny bisikileta izay natao ny ankamaroan'ny lalana tany Thailand. Ka lasa lavitra ny làlana rehetra dia mahazo aina tsara ny mitondra fiara. Mila mahatsapa tsara ny haben'ny fiara ianao ary aza adino fa amin'ny fotoana rehetra dia ny "bisikileta dia" hilatsaka "eo anelanelanareo (eo anoloanao, eo aorianao) ary ny sisin'ny arabe. 🙂
Ny fifamoivoizana any Thailand, indrindra eo amin'ny faritra mpizahatany dia tena matevina tokoa. Fa averina indray, ity dia toetran'ireo firenena ao Azia Atsimo Atsinanana. Raha misy fifamoivoizana fifamoivoizana dia na kely aza, fa mila miomana ianao fa ny bisikileta dia hiezaka ny hibodo ny isaky ny santimetatra alàlan'ny lalana eo alohan'ny tsipika fiatoana, ary tsy misy na dia mariky ny fanarahana ny laharana aza. 🙂 Amin'ny voalohany dia mety tsy mahaliana an'io. Saingy efa zatra izany ianao, ny tenanao dia tsy ho voamarika hoe ahoana no nahatonga anao niaraka tamin'ity taova ity, izay fifamoivoizana any Thailand.
Thailand, toy ny ankamaroan'ny firenena any Azia Atsimo Atsinanana, manana toetra mampiavaka azy. Ny sisin-dalana dia tsy misy na mety tery. Inona ny olana sy ny adin-tsaina ho an'ireo mpizahatany mpandeha an-tongotra. Midika ho fahasarotana ho an'ny mpamily anefa izany, satria matetika mandeha amin'ny arabe ny mpandeha an-tongotra.
Ankoatr'izay, na ny sakan-dàlana sy sombin-dàlana amin'ny sisin-dàlana dia ampiasaina betsaka amin'ny toerana fiantsonan'ny bisikileta sy fiara. Izay tokony hohalavirain'ny mpandeha an-tongotra ary mandavanta bisikileta sy fiara. Ilaina indrindra ny mitandrina ny fiaran-dalanao, satria tsy izy ireo irery no mitazona ny antsasaky ny lalana, afaka misokatra isaky ny misy ny varavarana ary misy fiantraikany. eny an-dalana any Azia dia tokony ho mailo hatrany. Ankoatry ny olona sy ny fiarany, ny alika, ny vorona, ny gidro ary ny biby hafa, dia afaka mitsambikina eny an-dalana.
Na dia izany aza, tsy maintsy manome crédit ianao, alika sy biby hafa, eto dia tena mahira-tsaina amin'ity lafiny ity ary manandrana tsy hihanika ny lalana (tsoratry ny mpanoratra).
Mampiavaka ny fitsipiky ny fifamoivoizana an'i Thailand
Ny ankavia kosa dia averin-tanana, toy ny ankamaroan'ny firenena Azia, firenena Eropeana sy Afrikanina.
Tsy maintsy miampita ny lalana aloha ianao raha mijery ny miankavanana, ary avy eo miankavia. Zava-dehibe ary tsy fahita firy ho an'ireo izay nandany ny ankamaroan'ny androm-piainany tao amin'ny firenena iray nitondra fifamoivoizana tanana.
Ao Thailandy, misy ny "sakana miankavia", saingy fotoana mampientam-po izao, ary tsara kokoa ny miomana amin'ny zava-misy fa tsy misy olona mamela anao hiditra, azo atao ny mpiara-miasa aminao izay tsy mahalala ny fitsipika. 🙂
Amin'ny sisin-dalana dia avela foana ny ankavia. Mila ataonao fotsiny fa tsy manelingelina ny hetsika ataon'ireo izay manatona ny jiro "maitso" ny lozam-pifamoivoizana.
Izay ao anaty faribolana iray no laharam-pahamehana hatrany, raha toa ka tsy misy famantarana ny mifanohitra (izany dia tsy fahita firy ny famantarana toy izany).
Tandremo tsara ny fitsaharana. Ireo izay manoloana ny jiro fifamoivoizana, azo takarina dia aza miantso azy ireo raha mijoro eo amin'ny jiro fifamoivoizana ianao. Fa raha mahita tsipika fiatoana eo alohanao eo amin'ny làlan-jotra tsy voafehy matetika ianao, dia ampiseho mazava izany fa faharoa ny làlanao.
Any Thailand, toy ny any amin'ny firenena rehetra any Azia Atsimo Atsinanana, dia matetika manome voninahitra. Manome zavatra iray foana ny fihodinana! May akoho alohan'ny fehy ho an'ireo afaka mitaingina ho an'ny mamadika ny ho avy. Manome famantarana fampitandremana izy ireo rehefa tratran'ireo trandrana (Zava-dehibe izany raha toa ianao ka handeha hiasa bisikileta). Tsy mijanona izy ireo raha toa ka maharesy ny toe-javatra mampihetsi-po izay tsy tokony halehany na hiadana. 🙂 Eny, mazava ho azy fa manome voninahitra an'ireo izay “matory” eny an-dalana izy ireo. 🙂
Raha ny jiro no mipoapoaka ny jiro dia tsy mety izany.
Raha miakatra beam-pandeha ambony fiara ny fiara tsy ho ela, dia midika izany fa mikasa ny handeha izy, ary midika izany fa handeha hifindra aminao izao. 🙂
Manaova satroka mandrakariva. Tsy natao hanakanana ny polisy tsy hikasika anao izany fa voalohany indrindra hiaro ny lohany mafana raha misy loza. Minoa ahy, ny taovolon'ny volavolan-dalàna dia faharoa amin'ny resaka toy izany :). Eny, ary tsy lohany mafana. Mbola mahazo mafana kely ao. 🙂
Miomàna (amin'ny fiara sy eo amin'ny bisikileta) ho tratran'ny hoe mety ho tratra ianao na miankavia sy miankavia. Ankoatr'izay, tsy misy fanarahan-dalàna ny laharana, ary an-tsangana dia maro ny bisikileta mety mifanaraka aminy.
Ny fahazoan-dàlana iraisam-pirenena mitondra fiara (izay milaza fa "fahazoan-dàlana mitondra fiara") dia manan-kery any Thailand, raha toa ka manana sokajy fiara mety "misokatra" ianao..
Ny "police" fifamoivoizana eo an-toerana dia tsy dia mijanona, saingy mbola misy foana. saika mihodinkodina mandamina ary mampitsahatra ny mpizahatany rehetra fa tsy fahita izany.
Ary ny ankamaroany dia ajanonin'izy ireo izay tsy mitafy fiarovan-doha (raha amin'ny bisikileta), ireo izay manao fihetsika tsy mendrika eny an-dalana (mamo na tsy manaja toetra), ary afaka mihaino ireo izay miantso ihany koa amin'ny fiatoana.
Mila mahatakatra ianao fa afaka mitaingina tsy misy fahazoan-dàlana, ary na dia mijanona anao aza izy ireo dia handoa onitra, 400 baht ($ 13) ianao, ary hamela anao handeha izy ireo. Fa raha misy ny loza tsy ampoizina, na inona na inona meloka, dia ho an'ny olona tsy manan-jo ny tsiny.
Ary koa ny fiantohana amin'ny bisikileta na ny fiara dia tsy hiasa raha tsy manana ny zo amin'ny endrika mahazatra ny mpamily.
Azonao atao koa ny mahazo zon'ny eo an-toerana (vidiny 250 ka hatramin'ny 500 baht (8-16 $)), na hanokatra ny sokajy tsy hita ao amin'ny anao manokana.
Mba hanaovana izany, dia mila mahazo tatitra ara-pitsaboana amin'ny fahazoan-dàlana amin'ny fiara ianao. Ny sandany dia miankina amin'ny fahatsaran'ny toeram-pitsaboana na hopitaly izay alehanao. Varies avy amin'ny 100 hatramin'ny 400 baht (3-12 $.
Miaraka amin'ity fanamarinana ity, mila mandeha any amin'ny biraon'ny fifindra-monina ianao, izay tsy maintsy atolotra pasipaoro sy taratasy fanamarinana ara-pitsaboana (indraindray mangataka fifanarahana fanofa-trano) izy ireo. Ao no omena alalana hahazoanao zo.
Amin'ity fahazoan-dàlana ity dia alefa any amin'ny biraon'ny polisy eny amin'ny biraonao ianao (departemanta fifamoivoizana). Ao ianao tsy maintsy handalo ny fitsirihana famoronana teoretika sy azo ampiharina (tsy eo no ho eo, mazava ho azy, azo atao ao anatin'ny roa andro, fa aleo ao anatin'ny iray na roa herinandro aorian'ny fandefasana antontan-taratasy. Miankina amin'ny entana io).
Ary raha mifanaraka amin'ny valin'ny fitsapana ny zava-drehetra, dia mahazo fahazoan-dàlana mpamily Thailandey mandritra ny herintaona.
Afaka herintaona, ny fahafaha-ara-dalàna dia azo itarina mandritra ny dimy taona, hiseho indray ao amin'ny tobin'ny polisy fifamoivoizana. Fa izany no ilaina ny fananana Visa tsy NON-TRAVEL (fandalinana, asa, sns)
Ary miaraka amin'ireo zo toy izany (izay nandritra ny 5 taona) dia afaka mitety ara-dalàna ianao any amin'ireo firenena manodidina an'i Thailand (Myanmar, Laos, Cambodia, Vietnam, Brunei, Malaysia, Indonesia, Singapore, Philippines).
Ny olana momba ny toeram-piantsenana mendrika dia arahi-maso miaraka amin'ny hamafin'ny fahaiza-manaon'izy ireo. Ary afaka mivezivezy any amin'ny faritra sazy amin'ny antsasaky ny ora ny fiara-nao, amin'ny resaka fiara izay tsy azo atao izany.
Tsy afaka mijanona eo ianao raha hoso-doko ny loko mena sy fotsy.
Raha mavo sy fotsy ny famantarana dia io no toerana fijanonan'ny taxi-be sy fitateram-bahoaka.
Ny marika mivoatra. Lazainy fa amin'ity sehatra ity, FAHAGAGANA, tsy misy olona tokony hijanona na hijanona. Na eo amin'ny fitohanan'ny fifamoivoizana aza, amin'ny alàlan'ny fitsipi-pifehezana, tokony hialanao ny fijanonana eo amin'ny faritry ny marika toy izany
Ny fitsipika tsy voafehina - aza atao zaridaina misy zaridaina taxi-be (manaitra fotsiny izy ireo fa ny fisian'ny ankizy manao akanjo lava eo akaikin'izy ireo). Azo antoka fa saika rehefa miala amin'ny bisikileta ianao dia hikodiavany lavitra, ary hikaroka azy irery ianao.
Eny, ny fitsipika mahazatra mandrara ny fijanonana eo amin'ny sisintany, amin'ny fijanonan'ny fiara fitateram-bahoaka, dia manan-kery eto ihany koa.
Voatanisa eto ny fandoavan-ketra amin'ny fanitsakitsahana ny fifamoivoizana.
Fanasaziana noho ny fanitsakitsahana ny lalànan'ny fifamoivoizana (wilhard.ru)
mitaingina tsy misy fiarovan-tena - 400 baht;
mitaingina tsy misy fahazoan-dàlana - 400 baht;
fijanonana eo amin'ny toerana voarara - 400 baht;
tsy fahampian'ny fanjakana (400 baht);
fivezivezena maivana mena - 1000 baht;
fomba fitondra mampidi-doza - 400 baht;
U-turn in toerana voarara - 400 baht;
mijanona eo amin'ny toerana voarara - 400 baht;
fametrahana amin'ny fiara tsy miankina omen'ny mpanamboatra - 1000 baht;
tsy fisian'ny fiantohana fitaterana - 600 baht;
fifamoivoizana ho avy - 400 baht;
tsy fisian'ny fisoratana anarana amin'ny fiara (slipika mavokely) - 400 baht;
tsy fandoavana hetra momba ny fitaterana - 400 baht; fandidiana fiara mihoatra ny haavon'ny tabataba napetraky ny fenitra - 1000 baht;
fandavana tsy hanao fanadinana ara-pitsaboana - 1000 baht
Mazava ho azy fa eto isika dia miresaka momba ny onitra ofisialy izay tsy maintsy arotsaka amin'ny fomba napetraky ny lalàna. izany hoe Miresaka momba ny toe-javatra iray izay nahasakana anao ny fanitsakitsahana anao, nesorina ny zonao ary ho valin-kasira no nomenao anao handoa izany. Aorian'izany dia mila tonga any amin'ny paositry ny polisy ianao, izay andoavanao io valim-pifandraisana io avy eo dia avereno ny zonao.
Raha sendra tsy nahitana zo tsy nahy ianareo dia haka ny bisikileta izy ireo. Ary ny zava-drehetra dia ho toy izany koa.
Ny fomba iatrehana izany dia raharaha ho an'ny tsirairay. Tsy tsiambaratelo fa maro no "manaiky" eto an-toerana. 🙂
Ny fitsipi-pifehezana ao Thailand dia voamarina kely kokoa noho ny firenena CIS na Eoropa, saingy mbola mahazo aina tsara ny mandeha eo (notononin'ny mpanoratra). Samy mitondra any am-pitiavana ny rehetra! Zava-dehibe izany. Tsy misy antony tokony hatahorany. Ao amin'ny Internet, horohoro be dia be ny voasoratra momba ny fifamoivoizana mivaingana, ny fomba manidina ny Thais adala, ary izany rehetra izany dia nohamafisin'ireo sary feno lalana. Eny .. misy ampahany ihany fa, saingy, rehefa arotsaka ao amin'ity ony ity ianao, dia mivadika ho rafi-pandaminana arak'izay mitroatra ity korontana ity, nanjary azo tsapain-tanana sy mazava ny zava-drehetra!
Mahasoa sy mifandraika